Dapr, oge mmeghe nke mepere emepe nke ihe omuma nke igwe ojii | Site na Linux
Ọchịchịrị | | Netwọk / Sava
Microsoft ka wepụtara 1.0 nke igwe ojii oge ojiri gaa nke a na-ekesa Oge Ngwa (Dapr).
N'okwu Microsoft, Dapr dị Oge ojiri gaa (oge ogbugbu) emeghe iyi, obere na ihe omume chụpụrụ que na-enye ndị mmepe ohere iwu ngwa ngwa ngwa ngwa, microservices, ala na steeti ndị na-agba ọsọ nwa afọ n’igwe ojii na akụrụngwa Edge (dịka Azure Stack Hub ma ọ bụ AWS Outpost).
Site na ụdị nsụgharị mbụ a, ngwa Dapr bụ enwere ike itinye ha na akụrụngwa akwadoro onwe ha ma ọ bụ na ụyọkọ Kubernetes na ndapụta mmepụta. Ya mere, Dapr bu n'uche na ndi mmepe na-ekeputa ngwa ohuru ohuru, tinyere ndi na-akwaga ma na-aru oru ha na ihe ndi ozo di na ya.
Dị ka uru, Microsoft na-akọ na iji Dapr ga-eme ka arụpụta ihe nrụpụta na-enweghị atụ site n'ibelata oge ha nwere ike iji mepụta ngwa ha.
Iji nweta nghọta ka mma, ndi oru ngo a kowara na oge Dapr ga - enye ndị mmepe ohere itinye uche na ide ederede echiche azụmahịa karịa nchọpụta nsogbu nke usoro kesara.
Na mbipute a nke 1.0, ndị otu Dapr na-akọ na ha lekwasịrị anya Kubernetes dị ka ebe nnabata nnabata maka ịgbanye ngwa mmepụta. Ejikọtara ya nke ọma n'ime ụgbọ elu Dapr na ụlọ Sidecar Dapr. Ọmụmaatụ,
Microsoft na-agbakwụnye na Dapr, nke nwere ihe karịrị 70 ihe mepere emepe, ya mere a na-ewepụta ya dịka azịza maka ọnọdụ dịgasị iche iche. Nke a na - eme ka Dapr bụrụ nhọrọ mara mma maka ndị mmepe na - achọ iwu igwe ojii nọọrọ onwe ha nwere nnukwu ọrụ.
Anyị na-ekwu na Dapr anaghị agbakwunye n'otu ikpo okwu yana ezubere iji ya site na asụsụ mmemme ọ bụla site na usoro HTTP na gRPC. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na ngwa ngwa Dapr nwere ike ịgba ọsọ na igwe ojii Azure, AWS, Alibaba na igwe ojii Google.
Ihe ndi ozo Dapr na-agụnye teknụzụ mepere emepe na njikọta akọwapụtara nke metụtara ndị na-eweta igwe ojiidị ka teknụzụ ndị mmekọ. Ọ bụ ezie na atụmatụ a na-enyekwu uru maka ndị mmepe na-eji ya na Dapr, ọ nwekwara ike ịbụ okwu arụmọrụ maka ngwa ndị Dapr.
Na nke a, Microsoft na-emesi obi ike site n'ikwu na Dapr nwere oke ọrụ ọrụ na-arụ ọrụ ma bụrụ nke kachasị nke ọma maka ndapụta ọsọ ọsọ.
Na ule, oge igbu oge na-agbakwunye banyere 1,2 ms nke latency site na oke ruo 90th percentile na mkpokọta 2 ms na 99th percentile. N'ihe banyere nchekwa, ndị otu Dapr na-atụ aro, iji chebe onwe ha megide mwakpo ndị mmadụ na-anọ, na-enwe izo ya ezo nke Dapr nyere site na asambodo x.509 nke enyere site na ọrụ ụgbọelu ya na-achịkwa ma gbanwee ọhụrụ.
Zụlite Dapr, Microsoft tụkwasịrị obi na obodo emeghe nke 2019 nke ihe karịrị 114 ndị nyere aka.
Na 2021, ọnụ ọgụgụ ahụ eruola 700, na-anọchite uto nke ihe karịrị ugboro isii naanị n'ime ọnwa 16, na-egosi mmasị ọrụ a na-eweta n'etiti obodo ndị mmepe.
Dị ka ndị na-enye Dapr, anyị nwere òtù dịka Alibaba Cloud, XaashiCorp, Microsoft, ZEISS, Ignition Group, yana ndị mmadụ n'otu n'otu.
N'ikpeazụ, ebe Microsoft chọrọ ka Dapr mepee, na-anọpụ iche ma tinye ya, ụlọ ọrụ ahụ ekwupụtala na ọ nọ na usoro ịkwaga na ụdị gọọmentị mepere emepe.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya banyere Darp, ị nwere ike ịlele nkọwa Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Netwọk / Sava » Dapr, oge mmeghe nke na-eme ka okike nke ngwa ndi ozo n'ime igwe ojii
CodeCarbon, ngwa ọrụ mepere emepe nke na-achọpụta mmetọ sitere na nyocha mmụta igwe